We Fight We Win. -- " More than Media ": ဦး ခင်ညွန့်နဲ့ဦး ၀ီရ သူ ဘာကြောင့် တွေ့ ကြတာလဲ
ဦး ခင်ညွန့်နဲ့ဦး ၀ီရ သူ ဘာကြောင့် တွေ့ ကြတာလဲ
ဘာသာရေးလှုံ့ ဆော်မှုများ ဟာ ဦးခင်ညွန့် လက်တွေ ပါနေ တယ် လုို့ သံတမန် သတင်းရပ်ကွက်များ က လာတဲ့သတင်းတွေ က ဆိုနေကြပါတယ်။
KHIN NYUNT exactly followed up the way and system, which was set up by his father,JUNTA, NE WIN.
For 50 years , NE WIN and KHIN NYUNT conducted uncountable criminals to the innocent
Now he comes out infront of the public AS A MONK when he is near to death.
STUPID GANGSTER IN BURMESE HISTORY.
အဘရယ်.. သနားလို့လွှတ်ခိုင်းထားတာ။ အေးအေးဆေးဆေးနေပါ။
မိုးသီး..ခွေးလီးစုတ်ပြီး ပြန်လာတယ်..ဟိုကအခွင့်အရေး မယ်မယ်ရရ မပေးလို့ နယူးယောက်မှာ ယောင်တောင်တောင်နဲ့ .. ရေးဦးလေ မင်းပထွေး ရိုဟင်ဂျာတွေ အကြောင်း...လွှင့်ပါဦးကောလဟာလတွေ